ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကို ဘယ်ယောက်ျားလေးကမှလက်မလွှတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့… – Trend.com.mm
အချိန်အတော်ကြာလက်တွဲလာကြတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဒီအရည်အသွေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေက လုံးဝလက်မလွှတ်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့် မင်းရဲ့ ဘေးမှာဒီလိုအရည်အသွေးတွေပြည့်စုံနေတဲ့မိန်းကလေးရှိနေပြီဆို လက်လွှတ်မခံဖို့အကြံပေးထားပါသေးတယ်။ဘယ်လိုအရည်အသွေးမျိုးလဲ?
ကိုယ်မပြောပဲ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသိတဲ့မိန်းကလေးမျိုး၊ကိုယ့်မျက်နှာကြည့်ရုံနဲ့ ဘာလိုချင်လဲတန်းသိတဲ့မိန်းကလေးမျိုး၊ဘယ်အရာမဆိုကိုယ့်ထက်အတွေးအခေါ်ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးမျိုးရှိနေပြီလား?
မင်းချစ်သူက ရေခွက်ထဲမှာ ရေတစ်ဝက်ကြီးတောင်ကျန်သေးတယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့လောကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တတ်သူလား?အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ရှိသူဟာဘယ်နေရာမဆို အကောင်းအဆိုးချင့်ချိန်တတ်လို့ စိတ်ချမ်းသာရမယ့်အချစ်ရေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါပဲ။အရာရာကိုအဆိုးမြင်တတ်တဲ့သူဟာ တစ်ခြားသူတွေစိတ်ကိုပါညစ်နွမ်းစေလို့ အချစ်ရေးကသာယာပျော်ရွှင်စရာမရှိပါဘူး။ဒီလိုအကောင်းမြင်စိတ်ကို မင်းချစ်သူက ပိုင်ဆိုင်ထားရင် မင်းကံကောင်းတာပါပဲ။
*မရှိအတူ ရှိအတူ ခံစားမျှဝေတတ်တယ်
တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေက ချမ်းသာမှအဆင်ပြေမှတွဲချင်ကြသူတွေပါ။ဒါပေမဲ့ မင်းချစ်သူကတော့ မင်းအဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာလည်းဘေးမှာရှိပေးတယ်။နှစ်သိမ့်ပေးတယ်။အဆင်ပြေတော့လည်းမင်းနဲ့အတူ ဝေမျှခံစားတယ်ဆိုရင် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးမှာ ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စကားများဖို့ဆိုတာ ရှာမှရှားပါပဲ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြီးပြည့်စုံနေတာထက် နှလုံးသားနူးညံ့နွေးထွေးတဲ့သူတွေက ပိုပြီးလှပတယ်။ပိုပြီးခန့်ညားပါတယ်။ဒီလိုလှပမှုမျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူလည်းရှားပါတယ်။ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုတွေ့ရင်လက်လွှတ်မခံပါနဲ့။
ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ မင်းဘေးမှာအားပေးနှစ်သိမ့်ပြီးအားဖြစ်ပေးနိုင်သလို မင်းအပေါ်လည်းမမှီခိုပဲ သူ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။သူ့အတွက်စိတ်ပူပေးစရာလည်းမလို အကဲဖြတ်ပေးဖို့လည်းမလိုလောက်အောင်အရည်အချင်းပြည့်စုံပါတယ်။
ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရရင်တော့ ချုပ်ချယ်မှုတွေမရှိသလို ကိုယ့်အနာဂတ်ကိုယ် အကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။အောင်မြင်နေတဲ့ယောကျာ်းတစ်ယောက်နောက်မှာ ထက်မြက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့စကားက အပိုမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်အနှစ် ၃၀အကြာမှာမင်းရဲ့လက်တွဲဖော်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေမလဲသိချင်ရင်သူမ မိဘတွေကိုကြည့်ပါ။နောက်ထပ် အနှစ် ၃၀အတွင်း မင်းအပေါ်သူဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲသိချင်ရင် မိဘတွေအပေါ် သူမဘယ်လိုဆက်ဆံလဲကြည့်ပါဆိုတဲ့စကားတောင်ရှိပါသေးတယ်။မိဘနဲ့ဆက်ဆံရေးနွေးထွေးပြေလည်မှု၊မပြေလည်မှုဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေပါသေးတယ်။
*ရန်ဖြစ်ပြီးတိုင်း အဲ့ဒီရန်ဖြစ်မှုကို မရှိခဲ့သယောင်ဖြစ်စေတယ်
စုံတွဲ အတွဲ ၈၀ကို ၁၃နှစ်ကြာလေ့လာချက်အရ ရန်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း မိန်းကလေးတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့အမြဲတည်ငြိမ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသလို သူတို့ရဲ့ချစ်သူကိုလည်းတည်ငြိမ်အောင်ဖျောင်းဖျပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ဒီရန်ဖြစ်မှုကိုမရှိခဲ့သယောင် ခံစားချက်ကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုမိန်းကလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အချစ်ရေးက ရေရှည်ခိုင်မြဲသွားကြောင်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
လူတိုင်းက ပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ဘူး။အမှားလုပ်မိတတ်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့သူတို့အပေါ် အမှားလုပ်မိတဲ့သူတွေကိုလည်း ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးရှိနေပြီလား၊တွေ့နေပြီလား? ဒီလိုအငြိုးအတေးမထားပဲ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေဟာ အသက်ရှည်ရှည်နေရကြောင်းလည်းလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသေးတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မပြည့်စုံတာ၊တစ်ခြားသူတွေလည်း ဘယ်အမှားကင်းပါ့မလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကိုယ်ချင်းစာပေးထားတာကြောင့်သူတို့အပေါ် အနိုင်မယူမိဖို့တော့လိုပါတယ်။မဟုတ်ရင် နောင်တရနေပါလိမ့်မယ်။
ဒီထဲက အချက်အားလုံးဖြစ်စေ၊အချက်အနည်းငယ်ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါ သူတို့အပေါ်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံပါ။ဘယ်တော့မှသူမကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့။သူမရှိနေတဲ့အတွက် မင်းဘ၀က ပိုပြီးပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်။
အခြိနျအတျောကွာလကျတှဲလာကွတဲ့ခဈြသူစုံတှဲတှကေိုလလေ့ာဆနျးစဈကွညျ့တဲ့အခါမှာ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ဒီအရညျအသှေးတှပေိုငျဆိုငျထားတဲ့မိနျးကလေးတှကေို သူတို့ရဲ့ခဈြသူတှကေ လုံးဝလကျမလှတျဘူးဆိုတာ တှရှေိ့ခဲ့ရပါတယျ။ဒါကွောငျ့ မငျးရဲ့ ဘေးမှာဒီလိုအရညျအသှေးတှပွေညျ့စုံနတေဲ့မိနျးကလေးရှိနပွေီဆို လကျလှတျမခံဖို့အကွံပေးထားပါသေးတယျ။ဘယျလိုအရညျအသှေးမြိုးလဲ?
ကိုယျမပွောပဲ ကိုယျဘာဖွဈနလေဲဆိုတာသိတဲ့မိနျးကလေးမြိုး၊ကိုယျ့မကျြနှာကွညျ့ရုံနဲ့ ဘာလိုခငျြလဲတနျးသိတဲ့မိနျးကလေးမြိုး၊ဘယျအရာမဆိုကိုယျ့ထကျအတှေးအချေါကောငျးတဲ့မိနျးကလေးမြိုးရှိနပွေီလား?
မငျးခဈြသူက ရခှေကျထဲမှာ ရတေဈဝကျကွီးတောငျကနျြသေးတယျဆိုတဲ့အမွငျနဲ့လောကပတျဝနျးကငျြကိုကွညျ့တတျသူလား?အကောငျးမွငျတဲ့စိတျရှိသူဟာဘယျနရောမဆို အကောငျးအဆိုးခငျြ့ခြိနျတတျလို့ စိတျခမျြးသာရမယျ့အခဈြရေးတဈခုဖွဈမှာပါပဲ။အရာရာကိုအဆိုးမွငျတတျတဲ့သူဟာ တဈခွားသူတှစေိတျကိုပါညဈနှမျးစလေို့ အခဈြရေးကသာယာပြျောရှငျစရာမရှိပါဘူး။ဒီလိုအကောငျးမွငျစိတျကို မငျးခဈြသူက ပိုငျဆိုငျထားရငျ မငျးကံကောငျးတာပါပဲ။
*မရှိအတူ ရှိအတူ ခံစားမြှဝတေတျတယျ
တဈခြို့မိနျးကလေးတှကေ ခမျြးသာမှအဆငျပွမှေတှဲခငျြကွသူတှပေါ။ဒါပမေဲ့ မငျးခဈြသူကတော့ မငျးအဆငျမပွတေဲ့အခြိနျမှာလညျးဘေးမှာရှိပေးတယျ။နှဈသိမျ့ပေးတယျ။အဆငျပွတေော့လညျးမငျးနဲ့အတူ ဝမြှေခံစားတယျဆိုရငျ ဘဝတဈလြှောကျလုံးမှာ ငှကွေေးကိစ်စနဲ့ပတျသကျလို့စကားမြားဖို့ဆိုတာ ရှာမှရှားပါပဲ။
ရုပျပိုငျးဆိုငျရာပွီးပွညျ့စုံနတောထကျ နှလုံးသားနူးညံ့နှေးထှေးတဲ့သူတှကေ ပိုပွီးလှပတယျ။ပိုပွီးခနျ့ညားပါတယျ။ဒီလိုလှပမှုမြိုး ပိုငျဆိုငျထားတဲ့သူလညျးရှားပါတယျ။ဒီလိုမိနျးကလေးမြိုးကိုတှရေ့ငျလကျလှတျမခံပါနဲ့။
ထကျမွကျတဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျဟာ မငျးဘေးမှာအားပေးနှဈသိမျ့ပွီးအားဖွဈပေးနိုငျသလို မငျးအပျေါလညျးမမှီခိုပဲ သူ့ရညျမှနျးခကျြကိုပွီးမွောကျအောငျဆောငျရှကျနိုငျပါတယျ။သူ့အတှကျစိတျပူပေးစရာလညျးမလို အကဲဖွတျပေးဖို့လညျးမလိုလောကျအောငျအရညျအခငျြးပွညျ့စုံပါတယျ။
ဒီလိုမိနျးကလေးမြိုးကိုပိုငျဆိုငျထားရရငျတော့ ခြုပျခယျြမှုတှမေရှိသလို ကိုယျ့အနာဂတျကိုယျ အကောငျးဆုံးပုံဖျောနိုငျမှာအမှနျပါပဲ။အောငျမွငျနတေဲ့ယောကျြားတဈယောကျနောကျမှာ ထကျမွကျတဲ့မိနျးမတဈယောကျရှိနတေယျဆိုတဲ့စကားက အပိုမဟုတျပါဘူး။
နောကျအနှဈ ၃ဝအကွာမှာမငျးရဲ့လကျတှဲဖျောဘယျလိုပုံစံဖွဈနမေလဲသိခငျြရငျသူမ မိဘတှကေိုကွညျ့ပါ။နောကျထပျ အနှဈ ၃ဝအတှငျး မငျးအပျေါသူဘယျလိုဆကျဆံမလဲသိခငျြရငျ မိဘတှအေပျေါ သူမဘယျလိုဆကျဆံလဲကွညျ့ပါဆိုတဲ့စကားတောငျရှိပါသေးတယျ။မိဘနဲ့ဆကျဆံရေးနှေးထှေးပွလေညျမှု၊မပွလေညျမှုဟာ ကိုယျ့ရဲ့ အိမျထောငျရေးနဲ့လညျးသကျဆိုငျနပေါသေးတယျ။
*ရနျဖွဈပွီးတိုငျး အဲ့ဒီရနျဖွဈမှုကို မရှိခဲ့သယောငျဖွဈစတေယျ
စုံတှဲ အတှဲ ၈ဝကို ၁၃နှဈကွာလလေ့ာခကျြအရ ရနျဖွဈတဲ့အခါတိုငျး မိနျးကလေးတှဟော သူတို့ကိုယျသူတို့အမွဲတညျငွိမျအောငျပွောငျးလဲနိုငျစှမျးရှိသလို သူတို့ရဲ့ခဈြသူကိုလညျးတညျငွိမျအောငျဖြောငျးဖပြွောဆိုနိုငျစှမျးရှိတယျ။ဒီရနျဖွဈမှုကိုမရှိခဲ့သယောငျ ခံစားခကျြကိုအပွောငျးအလဲလုပျပေးနိုငျစှမျးရှိတယျ။အဲ့ဒီလိုမိနျးကလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတဲ့အခဈြရေးက ရရှေညျခိုငျမွဲသှားကွောငျးတှခေဲ့ရပါတယျ။
လူတိုငျးက ပွညျ့စုံနတောမဟုတျဘူး။အမှားလုပျမိတတျတာပဲဆိုတဲ့စိတျမြိုးနဲ့သူတို့အပျေါ အမှားလုပျမိတဲ့သူတှကေိုလညျး ခှငျ့လှတျပေးနိုငျတဲ့မိနျးကလေးမြိုးရှိနပွေီလား၊တှနေ့ပွေီလား? ဒီလိုအငွိုးအတေးမထားပဲ ခှငျ့လှတျနားလညျပေးလိုကျတဲ့သူတှဟော အသကျရှညျရှညျနရေကွောငျးလညျးလလေ့ာတှရှေိ့ထားပါသေးတယျ။ကိုယျကိုယျတိုငျတောငျမပွညျ့စုံတာ၊တဈခွားသူတှလေညျး ဘယျအမှားကငျးပါ့မလဲဆိုတဲ့စိတျမြိုးနဲ့ကိုယျခငျြးစာပေးထားတာကွောငျ့သူတို့အပျေါ အနိုငျမယူမိဖို့တော့လိုပါတယျ။မဟုတျရငျ နောငျတရနပေါလိမျ့မယျ။
ဒီထဲက အခကျြအားလုံးဖွဈစေ၊အခကျြအနညျးငယျဖွဈစေ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့မိနျးကလေးတှကေိုတှတေဲ့အခါ သူတို့အပျေါကောငျးကောငျးဆကျဆံပါ။ဘယျတော့မှသူမကိုလကျမလှတျပါနဲ့။သူမရှိနတေဲ့အတှကျ မငျးဘဝက ပိုပွီးပွညျ့စုံလာပါလိမျ့မယျ။